မြန်မာသတင်းစုံ – Page2– Welcome MMREPUBLIC
ရကေခြိနျမှာ သှားရောကျဖူးမြှျောရငျး ဒသေခံတှမေကျြရညျစို့ရတဲ့ သဖနျးဆိပျဆညျထဲက ဘုရားကွီး
Posted on April 24, 2021 April 24, 2021 Author admin	Comments Off on ရကေခြိနျမှာ သှားရောကျဖူးမြှျောရငျး ဒသေခံတှမေကျြရညျစို့ရတဲ့ သဖနျးဆိပျဆညျထဲက ဘုရားကွီး
ကျုးရပ်ကွက်မှ မီးဖွားထားတာမကြာသေးတဲ့ ကလေး(၇)ယောက်အမေ မုဆိုးမ မိသားစုလေးကို အိမ်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်
ပရဟိတဆိုတာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးအများအကျိုးကိုဆောင် ရွက်ရတဲ့အလုပ်မို့ တော်ရုံလူမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို နှစ်ရှည်လများလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော်ရဲ့ စေတနာကတော့ တကယ့်ကိုအံ့မခန်းပါပဲနော်။ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေဆီကို ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ကိုယ်တိုင်အရောက်သွားပြီး အကူအညီလိုတဲ့လက်တွေကို အနွေးထွေးဆုံး ဖေးမပေးခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
Posted on April 24, 2021 Author admin	Comments Off on ကျုးရပ်ကွက်မှ မီးဖွားထားတာမကြာသေးတဲ့ ကလေး(၇)ယောက်အမေ မုဆိုးမ မိသားစုလေးကို အိမ်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်
သူ့ပါးစပ်ကနေတောင်မှ ဖခင်ဖြစ်သူပြန်လွတ်လာဖို့ တစ်ခါမှ မတောင်းဆိုခဲ့ဘူးကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသား မင်းမော်ကွန်းဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရားဘက်ကနေရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်ရင်း ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။မင်းမော်ကွန်းဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ တစ်ရက်တစ်လေတောင်မှမနားပဲ နေ့တိုင်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted on April 22, 2021 Author admin	Comments Off on သူ့ပါးစပ်ကနေတောင်မှ ဖခင်ဖြစ်သူပြန်လွတ်လာဖို့ တစ်ခါမှ မတောင်းဆိုခဲ့ဘူးကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ရောဂါအခံရှိပေမယ့် လူထုလှုပ်ရှားမှုပွဲတွေမှာ အပင်ပန်းခံပြီးလိုက်ပါခဲ့ရာကနေ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦး…….
ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုပွဲတွေကတော့ ယခုဧပြီလအထိတိုင်အောင် နေရာတိုင်းမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မြင်တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆန္ဒတွေအတွက် ကြိုးစားပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပြီး..
Posted on April 20, 2021 April 20, 2021 Author admin	Comments Off on ရောဂါအခံရှိပေမယ့် လူထုလှုပ်ရှားမှုပွဲတွေမှာ အပင်ပန်းခံပြီးလိုက်ပါခဲ့ရာကနေ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦး…….
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင်အပေါ်ယံသာလုပ်ပြခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပြင်းထန်စွာဝေဖန်နေခြင်းကိုခံနေရတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းခံ လိုက်ရချိန်တွင် တရားစခန်းဝင် နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အပြစ်ပြောခြင်းတွေ ခံခဲ့ရသူ ပါနော်။ သို့ပေမယ့်လည်း တရားစခန်းက ပြန်ထွက်လာချိန် မှာတော့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရတာကြောင့် သူမကို ဝေဖန်တာတွေ လျော့ကျခဲ့ကြပါတယ်နော်။
Posted on April 17, 2021 Author admin	Comments Off on နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင်အပေါ်ယံသာလုပ်ပြခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပြင်းထန်စွာဝေဖန်နေခြင်းကိုခံနေရတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ….. သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ် ကိုတော့ အားလုံးလည်း သိကြမယ် ထင် ပါတယ်နော်။ သူမကိုတော့ အလှူ အတန်းတွေ အ ရမ်းလုပ်ပြီး ခင်ပွန်း ကလည်း အသည်းတုန်မတတ် ချစ်တာကြောင့် မိန်းကလေးအများစုက အားကျနေကြတာပါနော်။ သူတို့ရဲ့ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှုတွေကို ကြည့်ပြီး အံ့ဩနေကြသူ တွေလည်း ရှိပါတယ်နော်။
Posted on April 11, 2021 April 11, 2021 Author admin	Comments Off on တော်လှန်ရေးအစပိုင်မှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့ စမိုင်းလ်
မပုရေ စိုးကိုသံပုရာရည်တစ်ခွက်လောက်ယူခဲ့ပေးပါ” အချိန်အတော်ကြာသော်လည်းမပုကပေါ်မလာချေ၊ထို့ကြောင့်စိုးမိုးခိုင်သည်ထိုင်နေရာမှထ ကာမီးဖိုချောင်သို့ထွက်လာလေသည်၊မီးဖိုချောင်ထဲတွင်လည်းမပုကိုမတွေ့ရသောကြောင့်အလုပ် သမားတန်းလျားဖက်သို့ထွက်လာလေသည်၊မပု၏အခန်းရှေ့တွင်ယောက်ျားဖိနပ်တစ်ရံနှင့်မပု၏ ဖိနပ်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်သူမ၏စိတ်ထဲမှစဉ်းစားလိုက်မိသည်၊ “အင်း ။ မပုမှာယောက်ျားမရှိဘူး ။ သူ့ဧည့်သည်လားမသိဘူး” စိုးမိုးခိုင်သည်တန်းလျားနားသို့တဖြည်းဖြည်းကပ်သွားရင်းလှေခါးနားရောက်သောအခါအိမ် ထဲမှအသံများကိုကြားလိုက်ရလေသည်၊ငယ်ရွယ်သူပီပီစပ်စုလိုသောကြောင့်ထရံအပေါက်မှအသာ ချောင်းကြည့်လိုက်လေသည်၊အခန်းထဲတွင်မပုနှင့်ခြံစောင့်ကိုအေးတို့ကိုမြင်လိုက်ရသည်၊ကိုအေး ကအပေါ်ပိုင်းတွင်အ၀တ်မရှိဘဲပုဆိုးကိုကွင်းသိုင်းထားကာမပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားတွင်ဆောင့် ကြောင့်ထိုင်နေလေသည်၊ မပု၏အ၀တ်များသည်လည်းဘေးတွင်ပုံကျနေကာတစ်ကိုယ်လုံးဗလာ ဖြစ်နေလေသည်၊ကိုအေးသည်မပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုအသာဆွဲဖြဲလိုက်ပြီးသူမ၏နို့အုံများကိုလက် ဖြင့်ဆုပ်နယ်နေလေသည်၊မပုကကိုအေး၏လီးကြီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ှုသူမ၏စောက်ဖုတ်အ၀တွင် တေ့ပေးလိုက်သည်၊ “ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော်ကိုအေး” “အေးပါကွာ” စိုးမိုးခိုင်သည်ထိုမြင်ကွင်းကိုအသည်းတယားယား။
Posted on April 4, 2021 Author admin	Comments Off on အစမို့လို့ပါ
“နင့်ဟာကြီးကလည်း ကြည့်ပါဦး တောင်နေတာမာပြီးရှည်တယ်” ပန်းခြံထဲ၌ပုံ့ပုံကမြင့်အောင်၏ လီးတံကြီးကိုဆော့ကစားရင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့နှင့်မြင့်အောင်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးမတ်ဆင်ဂျာ၌ ပုံ့ပုံ့တောင်းဆိုလို့ဖြစ်စေ မြင့်အောင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ အောကားတွေ အောအကြောင်းတွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုရလောက်အောင်ခင်မင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်ရှိမယားဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်မှာ လူလွတ်ဖြစ်သည်။နှစ်ယောက်လုံး၃၂ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်ကလပိုင်းငယ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားမရတိုင်းမြင့်အောင်ကိုအကြံတောင်းကြည့်ရင်းမြင့်အောင်လည်းသူသိသောဆေးဝါးတွေအပြုအစုတွေပြောပြတတ်၏။နောက်ဆုံးအဆင်မပြေမှသူကြည့်ဖူးသောဖူးကားတွေထဲကလိုသဘောတရားတွေပြောပြပေးလိုက်သည်။ “နင့်ယောကျာ်းကိုစည်းရုံးတာအဆင်ပြေသွားပြီလား” “အင်းပြေလို့ ခုလိုနင်နဲ့လာတွေ့တာပေါ့” “တော်တော်စည်းရုံးလိုက်ရမှာပေါ့” “မဟုတ်ပါဘူး။
Posted on April 4, 2021 Author admin	Comments Off on သွားလူဆိုး
ကျနော်ကျော်ထက် ပါဘဝမှာဆင်ခြင်စရာ တွေမလုပ်သင့်တာ တွေလုပ်မိတဲ့အတွက်နောင်တတွေတလှေကြီး ရပေမယ့်အခုတော့ပြင်မရတဲ့ ကိစ္စတွေနှင့်နပမ်းလုံးနေရဆဲပါ၊၊ ကျနော်အရင်ကဦးစီးဌာနတစ်ခုရဲ့ ဦးစီးအရာရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။။အားလုံး ကျနော့်အကြောင်းလေး သိရအောင်ဖတ်ကြည့်ကြအုံး။ ကျနော်ဘွဲ့ရတော့ဌာနအလုပ်ဝင်တယ်ဒုဦးစီးမှူးရာထူးရတော့ကျနော်အိမ်ထောင်ပြုချင်နေပြီ၊၊ကျနော်ယူမည့်မိန်းမကသိပ်အချောကြီး တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။သူတို့မှာ ညီအကိုမောင်နှမခြောက်ယောက်ရှိတယ်၊၊ သူကလွဲလို့အားလုံးကျောင်းတက်နေကြ တာပေါ့၊၊သူ့အောက်ကညီမကဆယ်တန်း အောင်တော့အသက်က နှစ်ဆယ်လောက်ရှိပေမယ့်၊ ကျန်တဲ့မောင်တွေညီမတွေက ငယ်သေးတယ်၊၊မောင်ဆိုရှစ်တန်း လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ကလေးတွေကနှစ်နှစ်ကြီး နှစ်နှစ်ငယ်တွေ၊၊ကျနော်တို့ဌာနက အစကတော့ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်ညွှန်ချုပ် အသစ်ရောက်လာတော့သူက အရင်လူလိုအဟုတ်ပဲတကယ်လည်း အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျနော်ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်၊၊ အဓိကအလုပ်ကကျူး တွေဖယ်ပြီးမြေသိမ်းတာပေါ့၊၊ မတရားတော့မဟုတ်ဘူးပေ နှစ်ဆယ်တကွက်ကိုဆယ်သိန်းပေးပြီးတော့ပေါ့၊၊ အဲဒီတုန်းကဒိုင်နာတစ်စီးမှခြောက်သိန်း၊ လူတွေကဖယ်ပေးတဲ့လူတွေများတယ်၊ အချို့ကတော့မဖယ်ပေးဘူး၊၊ ဒီတော့ကျနော်ကလည်း အကွက်တွေပိုရအောင်လုပ်တာပေါ့၊ ဒါမှကျနော်လည်းတစ်ကွက်ဆယ်သိန်း ထွက်လာမှာလေ၊၊
Posted on April 4, 2021 Author admin	Comments Off on နောက်ဆက်တွဲ
သာယာကြည်လင်တဲ့ မနက်ခင်း လေးရဲ့အေးမြတဲ့လေညင်းလေးတွေနဲ့အတူသားသားတစ်ယောက် နိုးထလာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတာတစ်ပတ်တိတိရှိပြီလေ။ ဖေဖေရယ်မေမေရယ်တစ်ခန်း ကျွန်တော်ကတစ်ခန်း ၊ မမနဲ့ညီမလေးကတော့ကျွန်တော့်ဘေးကအခန်းမှာပေါ့။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ လူတွေလဲသွားလာလို့ မနက်ခင်းလေးကသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီ။ အိပ်ရာထဲမှာဟိုဒီတွေနေရင်းနဲ့ အခန်းအပြင်ကမေမေအသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ခဏဆိုမနက်စာစားပြီးဖေဖေ စက်ရုံသွားတော့မယ်လေ။ မေမေလဲဆိုင်သွားတော့မှာဆ်ိုတော့အိမ်မှာမမရယ်ကျွန်တော်ရယ်ညီမလေးရယ်သုံးယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကများတယ်။ မမက မေမေ အမရဲ့သမီးပေါ့ ငယ်ငယ်ထဲကမိဘတွေမရှိတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေပဲသမီးလေးလိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာလေ။ အခုဆို မမက ၂၈ ကျွန်တော်က ၂၃ ၊ညီမလေးက ၁၉ ရှိပြီပေါ့။ အားလုံးငယ်ငယ်ထဲကသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းပါပဲ ချစ်လဲ ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အောက်အလွှာမှာတော့ မေမေမောင်အငယ်တို့လင်မယားနေကြတယ်လေ။ ဒီလိုနေလာကြရင်းနဲ့ တစ်နေ့ပေါ့မေမေအကိုအကြီးဆုံးကဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူလျှောက်ပေးထားတဲ့ Green Card ကရပြီတဲ့လေ။ အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာလဲတစ်မျိုးပြောင်းစဉ်းစားရတော့တာပေါ့။
Posted on April 4, 2021 Author admin	Comments Off on အဆုံးသတ်